Jubbaland” Farmaajo colaad ayuu ka dhex abuurayaa Kenya & Somalia”
February 14, 2020 Mahad Jama 2
KISMAYO(P-TIMES)- Maamulka Jubaland ayaa jawaab adag ka bixiyey wareysi uu madaxweyne Farmaajo siiyey taleefishinka Universal oo qeyb ka mid ah uu ku sheegay in Kenya ay faro-gelin xooggan ku hayso arriamaha Soomaaliya gaar ahaan Jubaland.
Faragelinta Ethiopia ay kusamaysay Kofurgalbed yaa kadhigay Xalaal?
Su’aashaa hala waydiiyo Farmaajo iyo Xertiisa.
Kolay Somaliya dhimatay ee Ethiopia iyo Farmaajo Kofurgalbed kufilan ee
Kenya iyo Axmad madobe haloo daayo Jubaland,
just me and I says:
caqliga quraanjada ayaad meesha la timid,cudurka allaah hakuu siyaadiyo. islaan yahay candhada weyn.
Dagaal ka dhacay Caasimada Galmudug & Xiisad taagan
Maraykanka oo ka digay weeraro ka dhaca Kenya